Deni oo si carro leh uga hadlay Arrin ka dhacday Magaalada Garoowe - Awdinle Online
Deni oo si carro leh uga hadlay Arrin ka dhacday Magaalada Garoowe
Madaxwaynaha Puntland Saciid cabdullaahi Deni ayaa si carol eh uga hadlay banaanbaxiii rabshadaha watay ee shalay ka dhacay magaalada garoowe, isaga oo sheegay inay ka dambeeyaan dad sano siyaasadeed leh.
Deni waxaa uu sheegay in cabshada bulshada iyo banaanbaxa rabshadaha watay ee Garoowe ka dhacay in uusan ahayn mid la xiriira diidmada lacagta iyo sarifka balse uu ahaa mid Puntland lagu sumcad dilayo oo ay ka dambeeyeen dad ka faaidaysanaya dareenka bulshada isla markaana dano siyaasadeed iyo arimo kale.
Waxaa uu sidoo kale sheegay in dadkaasi dowladu taqaan iyaga iyo dadka Puntland ay is bari doonto ka dibna tilaabo ka qaadi doonto, sidoo kalena uu sheegay in arintaan lagu soo aadiyey Shirwayn oo dalka Jabuuti lagu qaban jiray oo marakan Garoowe lagu qabanayo oo ay ka soo qayb galayaan Madax Soomaaliyeed, Siyaasiyiin, Musharaxiin madaxwayne.
Madaxwaynaha Puntland oo wajigiisa laga dheehan karay carro xoogan ayaa inta badan hadalkiisa wuxuu ahaa hanjabaad la xiriirta in uu tilaabo ka qaadayo dadkii ka dambeeyey oo uusan marna bulshada u sheegin cida ay yihiin iyo wax cadaynaya danaha Siyaasadeed ee ay ka leeyihiin arintaan.
Previous articleRW Rooble oo Ururrada Bulshada Rayidka kala hadlay Arrimaha doorashooyinka
Next articleMuddo xileedka Baarlamaanka oo Maanta ku eg & xaalad siyaasadeed oo weli jirta